Chelmo - ရည်းစားမရှိသော မိန်းကလေးအတွက် အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ရည်းစားမရှိသော မိန်းကလေးအတွက် အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ရည်းစားမရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါနော်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကို မစဉ်းစားမိတဲ့ အားသာချက်တွေရှိနေပါလေ။ဘ၀ကို ကိုယ့်ရဲ့အဖော်မွန်တစ်ယောက်နဲ့ ဖြတ်သန်းရတာ ပျော်ရွှင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် စဉ်းစားဖို့လို အပ်တဲ့ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အားသာချက်တွေ များစွာရှိနေပါနော်။ အဲဒီ့အားသာချက်လေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
၀၁. ဘယ်သူ့အတွက်မှ တာဝန်ယူစရာမရှိပါ။
အလုပ်၊ ကျောင်းအတွက်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့အတွက်မှ တာဝန်ယူစရာမရှိတော့ဘူးလေ။ အဲဒါက ရည်းစား မရှိခြင်း ရဲ့အားသာချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပေါ့။ လက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းစပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝန်ရှိလာပါတယ်လေ။ အဲဒီ့တာဝန်ဆိုတာကလည်း ကလေးရလာတဲ့အချိန်မှာ ပိုမိုများပြားလာမှာပါ။ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကံကောင်းခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အ တွက် အချိန်တွေ ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
၀၂. ကိုယ့်အချိန်ကို ကိုယ်ပဲပိုင်ဆိုင်တယ်။
ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်အချိန်တွေကို ကိုယ်ပိုင်တယ်လေ။ အချိန်တွေကို ဘယ်သူ့အတွက်မှ သုံးစရာမလိုပါဘူး၊ ညစာစားမယ့်အချိန်မှာ အိမ်မှာ ရှိနေဖို့မလိုတာတွေ၊ တခြားချုပ်နှောင်ထားတာမျိုးလည်း မရှိတော့ဘူးနော်။ လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်တွေ လုံးဝအားလပ်နေပါတယ်လေ။ စာကြည့်တိုက်မှာ နာရီပေါင်းများစွာ စာဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင် လည်း ဖတ်နိုင်တယ်လေ။ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စိတ်ကအားလပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ တောင့်တနေတဲ့အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
၀၃. သင့်ပိုက်ဆံက သင့်ကိုယ်ပိုင်ပါပဲ။
ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ အငြင်းပွားစရာမလို ပါဘူး။ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖြေရှင်းချက်ပေးနေစရာ မလိုသလို ပိုက်ဆံအသုံးလွန်သွားရင်လည်း ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒါကလည်း စိတ်ကျေနပ်စရာ တစ်ခုဖြစ်ပဲလေ။ ပိုက်ဆံကို စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း လွတ်လပ်တဲ့တစ်ကိုယ်တည်းသမား ဘ၀ကိုဖြတ် သန်းတဲ့နည်း လမ်းတစ် ခုဖြစ်ပါပဲ။
၀၄. ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖြေရှင်းချက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။
ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖြေရှင်းချက်ပြစရာမလိုပါဘူး။ ဘာကြောင့်နောက်ကျနေရတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ရှင်းပြစရာမလိုသလို ဘယ်အချိန် အိမ်မှာရှိမယ်ဆိုတာကို လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှပြောပြစရာမလိုပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညစာစားဖို့ကိုလည်း ဘယ်သူ့အရိပ်အခြည်မှ စောင့်ကြည့်နေ စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့် ကိုကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
၀၅. စိတ်ကြိုက် အလှဆင်လို့ရပါလေ။
ယောက်ျားလေးများဟာ အိမ်အလှဆင်ဖို့အတွက် မိန်းကလေးတွေနဲ့မတူညီတဲ့ အမြင်တွေရှိနေနိုင်တယ်နော်။ အေး အေးဆေးဆေး နေတတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကလည်း ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ရှိတတ်ကြတယ်လေ။ ပြောရရင် တော့ မိန်းကလေးက ကုတင်အနီရောင်ကို သဘောကျနေရင်တောင်မှ ကိုယ်သဘောကျတဲ့အရောင်မျိုးကို ရွေးချယ် တတ်ကြတာပဲလေ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့လို မျိုးတွေကို စိတ်ပူနေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီနော်။
၀၆. အစီအစဉ်တွေလည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပဲလေ။
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အစီအစဉ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် မလုပ်ခင် ကြိုတင်ပြီး ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး လုပ် စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ အစီအစဉ်လုပ်ပြီး ကိုယ်ဆန္ဒရှိသလို ပြုမူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်လေ။ စိတ်ပါရင် ကောက်ခါငင်ကာထလုပ်ရတာကလည်း ပျော်စရာတစ်ခုပါ။ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာ လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ရင်း အချိန်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပါ။
၀၇. သန့်ရှင်းရေးကိုလည်း သာမန်ထက်ပိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။
ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သန့်ရှင်းရေးကို အလွန်အကျွံလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ အသန့်ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့မယ်၊ လက်ထပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထဲမှာ သန့်ရှင်းနေဖို့၊ ပန်းကန်တွေကို ပြောင်လက်နေအောင်ဆေးကြောဖို့၊ အ၀တ်ကိုဖြူဖွေးနေအောင် လျှော်ဖို့ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ဆောင် ရတော့မှာပါ။ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘ၀ကိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ အနာဂတ်မှာ ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်မှုကလည်း ပြောင်းလဲ သွားမလားဆိုတာ ဘယ်သူ့မှ မသိနိုင်ပါဘူး။
ရည်းစားမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ နှစ်သက်မိတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကရော ဘာလေးတွေဖြစ်မလဲ။